Yaadannoo jireenya Wiinii Maandellaa - BBC News Afaan Oromoo
Yaadannoo jireenya Wiinii Maandellaa
Ms Maadikizelaa-Maandeellaa Bizaanaa Traankei baha Keeptaawonitti dhalatte
Dargaggettiini hojattu hawaasummaa, Nelsan Maandeellaa nama seeraafi roggeessii sochii farra appaartaayid waliin wal barte. Waggaan booda walitti heeruman.
Mr Maandeellaan hidhaa umurii gutuun itti murtaa'e. Ms Maadikizelaa-Maandellaa akka inni hiikkatuuf baay'ee yaalusheetiin duree mormituu appaartaayid taate.
Hidhamuunis guyyoota 491'f kutaa qofaa keessatti dabarsite.
Ms Maadikizelaa-Maandeellaa gara Biraandifoord mandara xiqqoo bulchiinsa Firii taawoniitti harii'atamte gara waggaa kudhaniitiif.
Ms M Maandeellaa 'gingoo gommaatiin' mormatti kaa'uun namoota motummaaf odeeeffanno ni kennu jedhamanii shakkaman osoo lubbuun jiranu gubuun ajjeessuu' deegaruun hasawa mormisiisaa taasifte. 'Waliin, harka walqabannee, kan nu waliin ta'an waliiniifi giingoo keenyaan, biyya keenya bilisa ni baafna,' jette.
Mr Maandeellaan waggoota 27 booda mana hiidhaatii hikaman. Ms Maadikizelaa Maandeellaa isa simachuuf karrarra turte.
Seipei Stompie kan waggaa 14 butuufi miidhuun himatamte. Moketi kan butamte bara 1989 eegdoota isheetiin ture. Booda garuu ajjeefamte argamte. Ms Maandeellaanis waa'ee kanaa yakka omaa akka hinraawwatiin mormitulleen balleessitu ta'un waan mirkanaa'eefu hidhaa waggaa jahaa itti murtaa'eera booda gara maallaqaatti geedarameef.
Ligii Dubartoota Kongirasii Biyyaalessaa Afrikaatti pirezidaantii ta'un filatamte. Bara 1997tti ammoo irra deebiin filatamte.
Ministira Ittantu Aartii, Aadaa, Saayinsii fi Teknolojii ta'unis motummaa tokkummaa Mr Maandeellaa keessa muudamte. Erga malaamaltummaan jalqabnuunsaa himatamteen boodas hari'atamte.
Gaa'ila waggoota 38 booda, jarri lamaan adda bahan
Sobaafi hanna liqaa baankiitiin himatamte. Booda ammoo murteen hannaa geedaramu illeen, murtee waggaa sadiifi baatii jahaa itti kenname.
Irra deebiin paarlaamaaf filatamte.Keessattu iyyeessa, gurraachoota Afriikaafi dargaggoo biratti baayyee jaalatamtu turte.
Wiinii M. Maandeellaa erga yeroo dheeraaf dhukkubsachaa turteen booda nagaadhumaan boqotteeti.
Waldhabdee bakka taa'umsaa xiyyaara keessatti uumameen hojii Waayit Haawus keessaa hari'amte